भोलि कार्तिक १० गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि कार्तिक १० गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
भोलि कार्तिक १० गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
admin October 26, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 364 Views
तपाईको मन निकै चंचल रहने छ जसकारण तपाईलाई निर्णय लिनमा धेरै समस्या हुनेछ। कुनै पनि महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने छैन । प्रतिष्पर्धीको सामना गर्नुपर्नेछ। नयाँ काम गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ। तपाईं केहि बौद्धिक वा तार्किक छलफलमा भाग लिनुहुनेछ।
कुनै पनि काम पूर्ण स्थिर भएर गर्नुहोला। यात्राको आयोजना सफल हुनेछैन। दाजुभाईबाट माया र सहयोग मिल्नेछ । कलाकार, कारीगर र लेखकहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। प्रतिस्पर्धीलाई परास्त गर्न सकिनेछ ।
तपाईको दिन आर्थिक रूपमा लाभदायक रहनेछ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्फूर्ति र आनन्दको अनुभूति हुनेछ । तपाईको दिन आफन्त र साथीभाइसँग खुसीसाथ बित्नेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ। मनमा आउने नकारात्मक विचारलाई हटाउनुहोला।
तपाईको दिन मनमा उदासी र भयको अनुभव भएर बित्नेछ । परिवारमा मतभेदका कारण पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहनेछ। मनमा दुविधा रहनेछ। बोलीमा ध्यान दिनुहोला। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। धेरै खर्च हुनेछ। मानहानि हुन सक्छ सावधान रहनुहोस्।
व्यापारमा लाभ र आम्दानी बढ्नेछ । राम्रो भोजन प्राप्त हुनेछ। साथीभाइसँग रमाइलो ठाउँमा जानुहुनेछ। स्त्री मित्रबाट विशेष लाभ होला। छोरासँग भेटघाट होला। कुनै शुभ घटना हुन सक्छ। दाम्पत्यजीवन राम्रो रहनेछ र पत्नीको सहयोग मिल्नेछ।
नयाँ काम गर्ने योजना पूरा हुनेछ। दिन व्यवसायी तथा जागिर गर्नेको लागि लाभदायक रहनेछ । उच्च अधिकारीको अनुग्रह रहनेछ, पदोन्नतिको अवसर मिल्नेछ। पिता पक्षबाट लाभ मिल्नेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। पारिवारिक वातावरण रमाइलो रहनेछ।
नयाँ कामको थालनी गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। बौद्धिक कार्य र साहित्य लेखनमा सक्रिय रहनु हुनेछ । तीर्थयात्राको अवसर मिल्नेछ। विदेशमा बस्ने साथीभाइ तथा आफन्तको समाचार सुन्न पाइनेछ, जसकारण मन प्रसन्न रहनेछ । सहकर्मीको सहयोग प्राप्त हुनेछैन। सन्तान चिन्तित रहनेछ।
स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला। खोकी, सास फेर्न वा पेटमा समस्या हान सक्छ। तपाई शारीरिक र मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहनु हुनेछ। रिसलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला । कुनै पनि अनैतिक काम र सरकार विरोधी गतिविधिबाट टाढै रहनुहोला । तपाईको अधिक खर्च हुनेछ।
तपाईको दिन सुख र शान्तिमा बित्नेछ। मिष्ठान्न भोजन र नयाँ वस्त्र प्राप्त हुनेछ। विपरीत लिंगीय व्यक्तिप्रति विशेष आकर्षण रहनेछ र भेटघाट रोमाञ्चक हुनेछ। तपाईको विचार स्थिर रहनेछैन। सार्वजनिक जीवनमा मान-सम्मान मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा राम्रो सुख मिल्नेछ।
तपाईको स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। परिवारका सदस्यसँग रमाइलो समय बित्नेछ। व्यवसायको विकासका लागि दिन फलदायी रहनेछ। धन लाभको योग छ। सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ, प्रतिस्पर्धीलाई परास्त गर्न सकिनेछ।
तपाईको दिन राम्रो रहनेछ। वैचारिक रुपमा चिन्तित हुने भएकोले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय नगर्नु नै फाइदाजनक रहनेछ । यात्रामा समस्या आउन सक्छ। तोकिएको काम पूरा हुन नसक्दा धेरै निराश हुनुहुनेछ। मन अशान्त रहनेछ। सन्तानको स्वास्थ्य वा शिक्षामा चिन्ता रहनेछ।
तपाईमा ताजगी र जोशको कमीमा बित्नेछ। आमाको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। आफन्त तथा साथीभाइसँग वादविवाद हुनेछ । धेरै समस्या र प्रतिकूल परिस्थितिको कारण शारीरिक -मानसिक स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। महिला र पानीबाट सावधान रहनुहोला।
Previous काठमाडौं कोठा भाडा लिएर बस्नेहरुको लागि आयो यस्तो सूचना, घरबेटीहरु झस्किए
Next कता हराए चर्चित गायक निमा रुम्बा ?